Agasti 2020: Okuhle, okubi nokuthakazelisa kwe-Free Software | Kusuka kuLinux
Agasti 2020: Okuhle, okubi nokuthakazelisa kweSoftware yamahhala
Kusele okuncane kuze kuphele le nyanga ka Agasti 2020, siletha ukubuyekeza kwethu kwesiko kwabaningi izindaba, okokufundisa, amabhukwana, imihlahlandlela, noma okushicilelwe okuvelele emkhakheni we Isoftware yamahhala, Umthombo Ovulekile kanye ne-GNU / Linux, esishicilele ku- Ibhulogi KusukaLinux.
Isifinyezo sanyanga zonke, njengoba abaningi sebazi vele, kuhloselwe ukuhlinzeka nge- okusanhlamvu okuwusizo okuncane kwesihlabathi yabo bonke abafundi bethu, ikakhulukazi kulabo abangakwazanga ukuzibona, ukuzifunda nokwabelana nabo ngesikhathi esifanele.
Ngakho-ke, siyethemba ukuthi lolu chungechunge lwezihloko, ku okuhle, okubi nokuthakazelisayo, ngaphakathi nangaphandle kweBlog Blog DesdeLinux ilusizo kakhulu, kulabo abafuna ukugcina bazi ngezincwadi zethu, kanye nezihloko ezihlobene ne- Informatics kanye Computingkanye Izindaba Zobuchwepheshe, ngoba, kwesinye isikhathi abaningi abavami ukuba nesikhathi sansuku zonke sokubona nokufunda yonke i- izindaba zenyanga yamanje lokho kuyaphela.
1 Isifinyezo sika-Agasti 2020
1.1.4 Okunye Okuthunyelwe Okunconyiwe kuka-Agasti 2020
1.2.1 Ukukhishwa kwe-Distros Agasti 2020
Isifinyezo sika-Agasti 2020
I-Linux 5.8: inguqulo enkulu kakhulu yomlando we-Linux isivele ikhishiwe: Uhlobo olusha lweKernel, olube olukhulu kakhulu ngokwenani lezinguquko ezifakiwe. Ngaphezu kwalokho, lezi zinguquko zimboza izingxenye ezahlukahlukene zomnyombo futhi zihlobene kakhulu nokusebenza kwangaphakathi nokuhlanzwa.
Abaphathi bamawindi: I-Graphical User Interfaces ye-GNU / Linux: Kusukela ekuqaleni kwe-GNU / Linux, ukusetshenziswa nokwehlukahluka kwe-Graphical User Interfaces (i-GUI) ebikhula. Futhi kulokhu okuthunyelwe, uzothola ukuhlanganiswa kwabaphathi bamawindi abangaphezu kwama-50 bobabili abazimele futhi abahlanganiswe neMvelo yeDeskithophu.
I-Telegram noma i-WhatsApp: Kungani i-TG iyi-App ekhethwayo yabasebenzisi be-Linux?: Kithina abathandi be-Free Software, Open Source ne-GNU / Linux, kusobala ukuthi uma kukhulunywa ngokusebenzisa iTelegram (TG) noma i-WhatsApp (WA), sikhetha eyokuqala kuneyokugcina. Kepha kungani iTelegram iluhlelo lokusebenza lwemiyalezo olukhethwayo lweLinuxeros?
Ukuhlaselwa okusha kweForeshadow kuthinta amaprosesa we-Intel, AMD, IBM ne-ARM: Iqembu labacwaningi abavela eGraz University of Technology e-Austria naseHelmholtz Center for Information Security (CISPA) bathole i-vector entsha yokuhlasela evela eForeshadow (L1TF).
Isimo esidabukisayo ngokuphepha kwe-Intanethi nge-satellite: IBlack Hat yethule umbiko ngezinkinga zokuphepha kuzinhlelo ze-satellite zokufinyelela kwi-Intanethi. Umbhali wombiko ukhombise ikhono lokunqanda ithrafikhi ye-Intanethi edluliswa ngeziteshi zokuxhumana zesathelayithi kusetshenziswa isamukeli esisezingeni eliphansi se-DVB.
Kuhlaselwe ukubhaliswa eTor obezama ukukhohlisa abasebenzisi bethrafikhi: Umbhali wephrojekthi ye-OrNetRadar, ebheka ukuxhumeka kwamaqembu amasha ama-node kunethiwekhi engaziwa kaTor, ushicilele umbiko ngokuhlonza i-opharetha enkulu yama-Tor exit node anonya, azama ukukhohlisa ithrafikhi yomsebenzisi.
Ukwakhiwa kokuqala kwe-Elementary OS 6 manje kuyatholakala: Ukuhlanganiswa kokuqala kwe-Elementary OS 6 manje sekuyatholakala ukuze abasebenzisi bazame zonke izici ezintsha zalokhu phuthukisa ngaphezulu ngaphambi kokwethulwa.
Ubumbano luthola inkampani yaseSpain iCódice Software: I-Unity Technologies, umakhi wenjini edumile ye-Unity 3D (akumele ididaniswe ne-Unity Shell), wenze ukutholakala kokufuna ukwazi. Bathenge inkampani yaseSpain iCódice Software enikezela nge-SW Plastic SCM, enye indlela yokulawula inguqulo (VCS) eya eGit.
ILibreOffice 7.0 iza nokuthuthuka okuningi kokuhambisana ne-DOCX, XLSX, PPTX nokuningiILibreOffice 7.0 iza nezinguquko eziningi ezisemqoka nezithuthukisi, kufaka phakathi ukusebenzisana okuthuthuke kakhulu ne-Microsoft suite, kanye nezithuthukisi ezahlukahlukene zokusebenza ezivela ekusheshiseni okususelwa eVulkan GPU.
I-UKUI: Imvelo ye-Linux engasindi eyenziwe nge-GTK ne-Qt: I-UKUI ichazwa ngonjiniyela bayo njengendawo elula futhi esheshayo yedeskithophu eyakhelwe "ohlakeni oluxhumekayo" lweLinux nokunye ukusabalalisa okufana ne-Unix. Ngaphezu kwalokho, inikezwa njengendawo yedeskithophu ekwazi ukuhlinzeka ngolwazi olulula nolumnandi ukubhekabheka, ukusesha nokuphatha ikhompyutha usebenzisa ubuchwepheshe be-GTK ne-Qt.
Okunye Okuthunyelwe Okunconyiwe kuka-Agasti 2020
IPocket PC ihanjiselwe ukuvula isigaba sehadiwe
Inguqulo entsha yeFirefox 80 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo
ICisco Packet Tracer: Ungayifaka kanjani inguqulo yakamuva ku-GNU / Linux?
Ukukhishwa kwe-Distros Agasti 2020
I-ALT Linux 9.1: 2020-08-02
I-BunsenLabs Linux Lithium: 2020-08-02
Iphrojekthi ye-BSD Router (BSDRP) 1.97: 2020-08-05
IMageia 8 Beta 1: 2020-08-08
IPorteus 5.0 RC2: 2020-08-09
I-GhostBSD 20.08.04: 2020-08-10
I-Finnix 121: 2020-08-10
I-CAELinux 2020: 2020-08-12
I-MX Linux 19.2 KDE: 2020-08-16
I-Linuxfx 10.5: 2020-08-17
Upholi 4.10: 2020-08-17
IKali Linux 2020.3: 2020-08-19
Imisila 4.10: 2020-08-25
Umlingo Ohlukanisiwe 2020_08_23: 2020-08-25
Njengenjwayelo, siyethemba lokhu "isifinyezo esincane esisebenzisekayo" ngamaphuzu avelele ngaphakathi nangaphandle kwebhulogi «DesdeLinux» ngenyanga ka «agosto» kusuka ngonyaka we-2020, yiba nentshisekelo nokusetshenziswa okuhle, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwesimangaliso semvelo, esikhulu futhi esikhulayo sokusebenzisa kanye nokwenzelwe «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Agasti 2020: Okuhle, okubi nokuthakazelisa kweSoftware yamahhala
IKubernetes 1.19 ifika nonyaka owodwa wokuxhaswa, i-TLS 1.3, izithuthukisi nokuningi
I-Chrome 85 isivele ikhishiwe futhi lezi yizinguquko zayo